Hadii uu xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir guuleysto maxaa guddoonka baarlamaanka iska badali kara? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hadii uu xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir guuleysto maxaa guddoonka baarlamaanka iska badali kara?
Khudbadii musharaxnimada ee taariikhiga aheyd uu xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir ka jeediyay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa noqotay tan loogu hadal heynta badan tahay, iyadoona ay xiiso gaar ah yeelatay, islamarkaana qabsatay baraha ay ku xiriirto bulshada.
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir oo taariikhdiisa ku bilaabay khudbada ayaa sheegay inuu dugsiga sare kaga baxay magaalada B/weyne, kadib labo sanno oo shaqada Qaran ahna kusoo qaatay degmada Xarardheere, isagoo waxbarasho dibadeed u tegay jaamacadda caalamiga ah ee Islamic International University ee Islamabad, Pakistan, halkaas oo uu kusoo bartay shareecadda Islaamka iyo qaanuunka.
“Waxaan dalka kusoo laabtay 1992-dii, xilligaas oo ay yareeyd in dadka Soomaaliyeed ku dhiiradaan joogitaanka dalka anigoo umadda kala soo shaqeeyay dhinaca waxbarashadda, gargaarka bini’aadanimadda, waxaan cagta soo mariyay dhammaan goboladda dalka uu ka kooban yahay, waxaan ku guuleystay aasaasidda goobo waxbarasho oo dalka ka hirgalay sida iskuulada ku bahoobay daladdda waxbarashada FPENS iyo Jaamacadda Simad” Ayuu yiri musharaxa oo ka hor hadlaayay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir ayaa sheegay inuu wax badan ka badeli doono muuqaalka baarlamaanka, isla markaana uu noqon doonto goob lagu soo hirto, baarlamaankuna noqon doono mid ku mashquulsan danaha dalka, sharciyadiisa, hormarinta dastuurka iyo midnimadda umadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale, wuxuu Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir sheegay inuu kala shaqeyn doono guddoomiyaha baarlamaanka ajendayaasha hor-yaala, isagoona sidoo kale balan qaaday inuu ka qeyb qaadan doono casriyeynta golaha shacabka.
Musharax Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir ayaa soo qaatay waxqabadkiisii intii uu ahaa wasiirka madaxtooyada Soomaaliya, isagoo kasoo shaqeeyay dib u heshiisiinta, wuxuuna tusaale usoo qaatay heshiiskii dowladda federaalka iyo maamaulka Jubbaland, kaasoo 2013 lagu baajiyay in dhiig ku daadan lahaa gobolada Jubbooyinka.
Wuxuu sidoo kale xusay inuu hormarin weyn ku sameeyay wasaaradda caddaaladda oo xilkeeda uu yahay muddo kooban, wuxuuna is-bedel la taaban karro ku sameeyay maxkamdaha dalka, xeer ilaalinta, danbi baarista iyo maxaabiista isagoo ka dhigay wasaaradda mid ka duwan sidii hore oo magac ahaanta keliya ay u jirtay.
Intii uu wasiirka cadaaladda Soomaaliya ahaa xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir wuxuu ku guuleysay anisixinta sharciyo badan oo baarlamaanku ansixiyeen sida:-
Sharciga golaha adeegga garsoorka oo noqon doona asaaska garsoorka dalka
Sharciga maxkamadda dastuuriga oo ahaa kii ugu horeeyay ee dalka loo sameeyo
Sharciga xabsiyadda iyo maxaabiista
Magaacaabidda guddiga adeegga garsoorka
Magacaabidda gudiga dib u eegista dastuurka iyo sharcigooda
Sharciga xuquuqda caruurta oo Soomaaliya sumcad weyn u soo jiiday
Sharciga maxkamadda racfaanka iyo xeer ilaalinta
Arrimahan oo dhan waxay caddeyn u yihiin shaqadii adkeyd ee Faarax soo qabtay muddo kooban oo xilka wasiirnimo ka haayay wasaaradda cadaaladda, taasoo aan loo saamixin inuu dhameystiro, howlahaasina ay ku hakadeen halkii uu xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir uga tagay.
WAA KUMA FAARAX SHEEKH C/QAADIR?
Faarax Sheekh C/qaadir wuxuu ku dhashay magaaladda B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadkii 21-10 -1966.
Aqoonta: wuxuu ka qalin jebiyay jaamacada caalamiga ah ee Islamabad (International Islamic University, Islamabad), isagoo bartay qaanuunka iyo sharciga islaamka.
2007 – 2011, Kuwait: Lataliye Sare: Direct Aid: oo ah hay’ad kulmiso, hay’addo gargaar, iyo waxbarasho oo ka kooban iskuulo iyo jaamacado ku yaalo dalalka Afrika, isagoo xafiisyo badan ka furay, dalalka Kenya, Tanzania, Gambia, Zanzibar iyo dalal kale oo badan.
Sidoo kale wuxuu noqday u qaabilsanaha wakaaladda muslimiinta afrika dalka Soomaaliya (African Muslims agency – AMA) oo dalka ka hirgelisay 1992 ilaa 2000 iskuulo badan laga furo gobolada dalka.
Wuxuu guddoomiye ku-xigeen ka noqday daladda waxbarashada FPENS oo ah dalad ay ku bahooben daladda ugu weyn dalka oo adeegyada waxbarashada, deeqo waxbarsho oo arday badan ka faa’iideen xilliyadii burburka iyo ilaa iminka.
2012 – Wuxuu noqday xildhibaan ka tisan dowladda federaalka Soomaaliya.
2012 – 2013:- Wuxuu noqday wasiiru dowlaha madaxtooyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya
2014 – 2015:- Wuxuu noqday wasiirka caddaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federalka Soomaaliya.
2016: Wuxuu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya
Ugu dambeyntii, Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir ayaa ku hadla luuqadaha kala ah Soomaali, Carabi, English, iyo Kiswaahili.